प्रचण्डको पछि किन लागे देउवा ? | DNFMEDIA
प्रचण्डको पछि किन लागे देउवा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गुणगान गाउँदै हिँडेका छन् ।
सँगै भएका कार्यक्रममा मात्र होइन बाहिर भएका कार्यक्रममा पनि देउवाले अहिलेसम्म राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याउन प्रचण्डको योगदान भएको तर्क गर्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले जस्तो पनि कदम चालेका थिए । नेकपामा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि प्रचण्डले पार्टी एकता जोगाउनभन्दा पनि ध्वस्त बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न देउवासँग साँठगाँठ गरे । हिजोको दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री हुँदा केही योगदान गरेर देशलाई गुन लगाएका थिए । ५ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाले आफ्नो कुशलता देखाउन सकेका छैनन् । देउवा आफू कमजोर भएपछि सधैं अरुको सहारा लिने अवस्थामा पुगेका छन् । देउवाको आफ्नो राजनीतिक अडान नभएकाले पनि उनले अरुको सहारा लिनुपरेको हो । देउवा अझै पनि प्रचण्डको सहारामा राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् । अहिले गठबन्धन बनाएर अघि बढेका कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक अर्काबीच सकारात्मक सन्देश बाँड्न लागेका छन् । यी तीनवटा पार्टीका प्रमुख एकले अर्कालाई उचाल्न र प्रशंसामा नै धेरै समय खर्च गर्न थालेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन उद्घाटनमा सम्बोधनका क्रममा देउवाले प्रचण्डले नै देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याउने क्रान्तिका नायक भनेका थिए । यतिमात्र होइन देउवाले प्रचण्डकै कारण राजनीति सहज ढंगले अघि बढेको भन्नसमेत भ्याए ।
दोश्रो जन आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको कार्यान्वयन पनि गिरिजाले नै गरे । संविधान लेखन गर्ने र जारी गर्ने काममा सुशील कोइरालाकाको महत्वपूर्ण योगदान रहयो । सुशील त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए । अरुको तुलनामा देउवाको योगदान कमजोर देखिएको छ । आफ्ना पार्टीका पुराना नेताको योगदानलाई बिर्सिएर अरुको वकालत गर्नुले ती नेताहरुको अवमूल्यन भएको प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । देउवा प्रचण्डलाई फकाएर विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एम्सीसी पास गर्ने दाउमा लागेका छन् । देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीका प्रचण्डलगायतको टाउकाको मूल्य तोकेका थिए । प्रचण्डको पार्टी पनि कमजोर भएकाले आगामी निर्वाचनमा कसैको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । दुवै पार्टीले आफ्नो फाइदाका लागि एकले अर्काको बखान गाउँदै हिँडेका छन् भन्ने प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
देउवा र प्रचण्डको यस्तो सम्बन्धको विषयलाई लिएर विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले देउवालाई व्यङ्ग्यमात्र गरेनन् सुझाव पनि दिएका छन् । मिश्रले कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बीपी कोइरालाकोे फोटो हटाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को फोटो झुन्ड्याउन देउवालाई सुझाव दिएका हुन् । मंगलबार राति एक टेलिभिजनमा बोल्दै संघीयताविरोधी मिश्रले गत आइतबार काठमाडौंमा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डको प्रशंसा गरेकोप्रति संकेत गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
देउवाको सरकार बने पनि जनताले शान्ति र सुरक्षाको महसुश गर्न पाएका छैनन् । ओलीले ५ वर्ष पूरै सरकार चलाएर जनतालाई विकासको प्रत्याभूति दिने र रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने सँगै जनताको जीवनस्तरमा बृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण योजना अघि सारेका थिए । आफ्नो सरकार योजनाबद्ध ढंगले ढालेपछि एकातिर ओली ती काम पूरा गर्न नपाएकामा चिन्तित छन् भने जनता पनि निराश भएका छन् ।
Previous: नारायणगढ–बुटवल सडकको म्याद थप गर्ने तयारी
Next: तेस्रो धार सिटौला कि सिंह ?